Nagarik Shukrabar - संविधान नमान्ने मन्त्री
संविधान नमान्ने मन्त्री
शुक्रबार, ०३ असोज २०७६, १० : १९ | शुक्रवार
सत्ताको स्वाद लिइरहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले यो वर्ष पनि संविधान दिवस नमनाउने भएछन्। उनको दल समाजवादी पर्टीले यो वर्ष पनि संविधान दिवस नमनाउने निर्णय ग-यो। पार्टीको निर्णयअनुसारै मन्त्री यादव सरकारले गर्ने संविधान दिवसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भए।
पार्टीले ०७२ सालमा जारी भएको संविधान त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण भएको भन्दै संविधान जारी भएको दिन (असोज ३ गते) को सन्दर्भमा खुसियालीको रुपमा दिपावली र विरोधको रुपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्रै संविधान दिवस मनाउने–नमनाउनेबारे चर्को विवाद बाहिरै छताछुल्ल भएको छ।
रमाइलो त के छ भने पार्टीका अध्यक्ष स्वस्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री भएर त्यसको स्वाद लिइरहेका छन्। अब जनताको आँखामा छारो हाल्न दिपावली नमनाउने भए। अर्कोतर्फ उनलाई दुविधा पर्ने नै भयो, संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउँ भने त्यही संविधानले उनलाई मन्त्री बनाएको छ। उनैलाई कार्यकर्ता कालो झण्डा देखाउन आए भने के गर्ने होला ?
पार्टीले संविधान दिवसका कार्यक्रमहरुमा सहभागी पनि नहुने निर्णय गरिहाल्यो। अब आफैँ सरकारमा भएका मन्त्रीको पार्टीले संविधान दिवसमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि यादव किन सहभागी हुन्थे ? समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीले संविधान दिवसको दिन त ‘संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता’ भन्ने विषयमा सातै प्रदेशका राजधानीमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेछ !
देशभित्रै बसेर विवादमा फँस्नुभन्दा मन्त्री यादवले अमेरिका उड्ने राम्रो युक्ति निकाले। संविधान दिवस छल्न उनी अमेरिका उड्न लागेको विषय बाहिरिएको छ। अब उनी एक्कैचोटि असोज १४ गते फर्किने रे ! त्यति बेलासम्म त संविधान दिवसको चर्चा सेलाइसकेको हुन्छ। मन्त्री हुन्, कम चंख छन् र ?
यही संविधानले दिएको अधिकार टेकेर सरकारको स्वाद लिने अनि जनताको आँखामा छारो हाल्न पनि नछोड्ने ! यो सत्तास्वादले मानिसलाई केसम्म गराउँदैन भनेको यही हो।
अर्को चुनावमा जनताको भोट तान्न सकिन्छ कि भनेर चिचीको पनि लोभ र पापाको पनि लोभ त गर्नु भएन नि ! राजनीति भनेको सिद्धान्त र निष्ठाका लागि गरिन्छ नि होइन ? हुन त सत्तामा भएपछि सबै ठीक भन्ने देख्नेहरुका लागि कसको पो के लाग्छ र ?